Kandidà Roland Ratsiraka : Mitaraina ihany koa !
Mitombo isa hatrany ireo mpanao politika mahita fa tsy tomombana ny fikirakirana ny valim-pifidianana navoakan'ny Vaomieram-pirenena Mahaleotena momba ny Fifidianana na ny CENI, ny sabotsy lasa teo. Misy ireo kandidà tsy fantatra anefa nahazo isa ambony raha ny fitarainan'i Roland Ratsiraka, filohan'ny antoko Malagasy Tonga Saina (MTS).
Ankotr'izay hoy izy, betsaka ireo birao fandatsaham-bato "fictifs", izany hoe tsy tena misy akory fa an-taratasy fotsiny, ka tokony ho jerena akaiky ny momba azy ireny.
Na eo ary izany rehetra izany, milaza ny tsy hametraka fitoriana eny amin'ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana (HCC) ny tenany ary miantso ny fahatonian'ny rehetra eo am-piandrasana ny valim-pifidianana ofisialy raikitra. Hita izao fa tsy iray na roa no mitaraina momba iny valim-pifidianana vonjy maika navoakan'ny CENI ny sabotsy teo iny, fa maromaro mihintsy, na kandidà io na mpanohana kandidà.
Mitodika any amin'ny HCC izany izao ny mason'ny rehetra. Hanana fahasahiana hanatontosa ny adidiny an-tsakany sy an-davany ve ity fitsarana ity sa tsia? Antenaina fa
tsy hanimba ny lazany sy ny endriny kosa ry filoha Jean-Eric Rakotoarisoa sy ireo namany fa hanome voninahitra ny fitokisana napetraka tamin'izy ireo amin'izao vanim-potoana mafonja loatra eo amin'ny tantaran'i Madagasikara izao.